ओलीले भने- म गाईभैंसी चराएर... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
ओलीले भने- म गाईभैंसी चराएर हुर्किएको ठिटो हुँ, कुनै दम्भ देखाउनु छैन
सेतोपाटी संवाददाता ललितपुर, पुस ८
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू शासक नभएको र आफूमा कुनै पनि खालको दम्भ नभएको बताएका छन्।
सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको ९४औँ जन्मोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू हलो जोत्ने किसाना परिवारबाट हुर्केर आएकाले आफूसँग अहंकार असम्भव भएको उनले बताए। ‘म कुलघरानाको होइन, घाँस काटेर, भकारो सोहोरेर हुर्किएको हो, ममा कुनै दम्भ छैन,’ ओलीले भने, ‘ओलीले दम्भ र अहंकार ठूला घरानाको प्रबृत्ति हो।’
समारोहमा वक्ता रहेका कांग्रेस नेता प्रदिप गिरिले ओलीको प्रशंसा गर्दै ओलीलाई श्री ३ जत्तिकै नेता भनेपछि ओलीले त्यसमा नरम प्रतिवाद गरेका थिए। ‘मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा संसदमा भनेको थिएँ– यो समयको समाप्ति होइन, समय चालु छ । त्यो मेरो मसिनो स्वरको वार्निङ थियो’ ओलीले भने, ‘मलाई अहिले प्रदिपजीले मसिनो स्वरमा वार्निङ दिनुभयो, अहंकारको कुरा गर्नुभयो । तर, म गाई भैंसी चराएर, बाख्रा चराएर हुर्किएको गाउँको ठिटो हुँ। मसँग शासकीय चरित्र छैन। मान्छेले आफूलाई शासक ठान्छन्, तर म आफूलाई सेवक ठान्छु। मेरा बा हलो जोत्ने मान्छे । म आफैं हलो जोतेर, गाई भैंसी चराएर घाँस काटेर, भकारो सोहेरेर आएको मान्छे। मेरा के अहंकार हुन्छन्? अहंकार त घरानाका मान्छेको चरित्र हो।’
तर, उनले आफूले शासक नठान्दैमा भ्रष्टाचार र कुरीतिलाई भने नसहने वताए। ‘मसँग अहंकार छैन भन्दैमा करप्सनप्रति पनि म लल्लुराम होइन’ ओलीले भने।
ओलीले चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएपछि हारजित राजनीतिको धर्म भएको बताए। तर, हारजीतलाई लिएर प्रणालीलाई असर पार्न नहुने उनको भनाई थियो ।
‘चुनावमा गएर भिडेपछि एउटा जित्ने एउटा हार्ने हुन्छ। रेफ्रीले सिठ्ठी बजाएपछि त एउटाले अर्कालाई हान्छ। हामीले नियम नै त्यस्तो बनायौं। रिङ भित्र छिरेपछि दुईटाले जित्न मिल्दैनथ्यो’, ओलीले भने, ‘तर, यो प्रणाली हामीले ल्याएका हौं, यसलाई संरक्षण गर्नैपर्छ । खेलको नियममा हार्न र जित्न तयार हुनैपर्छ। अब हामी सबै मिलेर राष्ट्रको काम गर्नुपर्छ।’
ओलीले दलहरुको सहमतिमा नै संविधान लेखिएकाले संविधानमा लेखिएको चुनावी प्रणाली मान्दिन भन्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसतर्फ लक्षित गर्दै खेल सकिएर एउटाले जितेर विजयको हात हल्लाएपछि अर्कोले खेलको नियम मान्दिन भन्न नहुने बताए। ‘हामी आफैंले बनाएको प्रणालीलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी तीब्र अघि बढ्नुपर्ने र विकास नभएको दोष अरुलाई दिएर पन्छिने ठाउँ नभएको बताए। ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास लक्ष्य हामीले १३ वर्ष भित्र पूरा गर्नुपर्छ’, ओलीले भने, ‘म काम गर्दिनँ अनि प्रकाशमान सिंहलाई अपजस हाल्दिएँ भने बाटो बन्छ? लक्ष्य प्राप्त हुन्छ? बन्दैन ।’
ओलीले आफूलाई किसुनजीसँग तुलना नगर्न आग्रह गर्दै किसुनजी अंध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा नेपाललाई ल्याउने आफ्नो पितातूल्य पुस्ता भएको बताए। ‘म किसुनजीसँग तुलनायोग्य छैन । उहाँ राणा शासनको अंध्यारोबाट उज्यालो युगमा ल्याउने पितातुल्य हुनुहुन्थ्यो’ ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले कहिले उहाँसँग संगत पाएँ, सँगै जेल बसेँ, उहाँ सादगी र साह्रै खुला हुनुहुन्थ्यो ।’
अध्यक्ष ओलीले कृष्णप्रसाद भट्टराईले एउटा युग र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको स्मरण गरे। राणाकालको कष्टकर समयमा समेत परिवर्तनका लागि लागेको भन्दै उनले भट्टराईको प्रशंसा गरे।
उनले भने, ‘अप्ठेरो समयमा पनि भट्टराईले समयको साक्षी मात्रै होइन त्यो समयलाई अघि बढाउन भूमिका पनि खेल्नुभयो,’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ८, २०७४, १०:०४:३४